Mogadishu Journal » Paris Saint-Germain 1-2 Manchester City: De Bruyne iyo Mahrez ayaa dhameystiray soo laabasho cajiib ah
Paris Saint-Germain 1-2 Manchester City: De Bruyne iyo Mahrez ayaa dhameystiray soo laabasho cajiib ah
Manchester City ayaa soo bandhigtay isbedel cajiib ah qeybtii labaad si ay ula wareegaan gacan ku haynta semi-finalka Champions League ee Paris Saint-Germain, Kevin De Bruyne iyo Riyad Mahrez iyagoo dhaliyay goolasha kulankii lugtii hore ee 2-1.
Tartan ka dhacay garoonka Parc des Princes ayaa u muuqday in PSG ay hogaanka u qabatay daqiiqadii 15aad markii kabtan Marquinhos - oo ku soo laabtay garoomada dhaawac gumaarka ah - uu madaxa la galay koone.
Si kastaba ha noqotee, markii ay aheyd kooxda labaad ee ugu fiicneyd qeybtii hore, City ayaa si weyn loo hagaajiyay ka dib qeybtii hore, barbaraha ayaa yimid markii De Bruyne uu kubad galiyay xerada ganaaxa uu ka gudbay qof walba si uu shabaqa u soo taabto.
Guushii 18-aad oo toos ah oo ay ka gaarto kooxda Pep Guardiola waxaa lagu xaqiijiyey laad xor ah oo Mahrez ah oo helay darbiga farqiga, iyadoo lumisay xakameyntii ciyaarta, PSG ayaa markaa lumisay qabowgeedii kulamadii ugu dambeeyay, Idrissa Gueye ayaa muujiyay casaan toos ah tartan halis ah Ilkay Gundogan.
Wax yar oo calaamado ah ayaa ka muuqan jiray riwaayadda oo ku imanaysa waqtiga nuska ah. Kooxda martida loo ahaa ayaa u qalantay inay ka horeyso ka dib markii Marquinhos - oo aan ciyaarin tan iyo markii uu shabaqa soo taabtay kulankii ay 3-2 kaga badiyeen Bayern Munich lugtii hore ee wareega 8da - ayaa si qurux badan u garaacay Angel Di Maria. Fursadii ugu fiicneyd ee City ay ku barbareyso ka hor inta aan la kala nasan ayaa timid markii kooxda martida loo ahaa ay hibo u siisay inay heystaan, laakiin Phil Foden ayaa kaliya awooday inuu si toos ah ugu toogto Keylor Navas markii uu fursad fiican ka helay bartilmaameedka. Hase yeeshe kooxda Pep Guardiola ayaa qalinka ku duugtay PSG si ay u bedesho wajiga kulanka. Waxay lahaayeen boqolkiiba 65.1 lahaanshaha ciyaarta ka dib, taasoo u horseeday iyaga inay helaan labo gool oo muhim ah oo ay ku ciyaaraan meel ka baxsan kulanka soo laabashada ee todobaadka dambe. De Bruyne ayaa u muuqday inuu bartilmaamed ka dhiganayay saaxiibkiis laakiin wuxuu ku dhameystay naftiisa, in kasta oo aan shaki ku jirin in Mahrez uu ula jeeday goolashiisa, PSG oo ku burbureysa cadaadis.
Inkasta oo ay wali jirto shaqo ay tahay in dib loogu soo celiyo Manchester, haddana markii ugu horreysay ee finalka Champions League ee kooxdu ay ku jirto gacanta City iyada oo ay ugu wacan tahay habeen aan la ilaawi karin oo ka dhacay Paris.
Waxa loola jeedaa? Ma jiraa qof seddexleey ah? City ayaa xaqiijisatay koobkeedii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka 2020-21 Axadii markii ay garaaceen Tottenham finalka EFL Cup. Horyaalka Premier League ayaa dhawaan soo raaci doona, laakiin Yurub ayaa talaabo aad u fog u qaaday Guardiola intii uu ku gudajiray guulaha weyn. Taariikhda ayaa hadda dhinacooda ah, in kastoo. Waxaa jiray 47 jeer oo hore oo ah koox Ingiriis ah oo badisay lugtii hore ee lugta labaad ee bug-garaaca wadada - iyo munaasabad kasta oo ay ku sii socdeen horumar. Mauricio Pochettino ayaa mas'uul ka ahaa kooxdii Spurs ee isugu soo baxday inay Ajax ka yaabiso Amsterdam isla markaana gaarto finalka 2019, laakiin Istanbul waxay u muuqataa inay hal milyan oo mayl u jirto shaqaalihiisa haatan ka dib dib u dhacan.
India COVID cases cross 18m, US to send $100m supplies: Live news
Kawaanka Hilibka ee Wardhiigley oo lagu wareejinayo Ganacsato laga iibsaday ! (Sawirro)